Mampifandray an'i Afrika: Rovos Rail dia hanangana ny diany atsinanana mankany Andrefana voalohany any Afrika.
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mampifandray an'i Afrika: Rovos Rail dia hanangana ny diany atsinanana mankany Andrefana voalohany any Afrika.
Tonga ny volana jolay amin'ity taona ity, Rovos Rail dia kasaina hampifandray an'i Afrika avy amin'ny Ranomasimbe Indianina atsinanana ka hatrany amin'ny Ranomasimbe Atlantika any Andrefana amin'ny alàlan'ny diany maharitra antsasaky ny volana avy any Dar es Salaam any Tanzania ka hatrany Lobito any Angola amin'ny fiaran-dalamby misy azy, ny Pride an'i Afrika.
Voasokajy ho fiaran-dalamby mpizaha tany faran'izay kanto eran'izao tontolo izao, ny fiaran-dalamby Rovos Rail na ny "Pride of Africa" ​​dia tokony hihodina avy any amin'ny tanànan'ny morontsiraky ny Dar es Salaam amin'ny ilany atsinanan'i Afrika, mamakivaky an'i Tanzania, Zambia, ary Demokratika Repoblikan'i Kongo (DRC) mankany Lobito any Angola any amin'ny Ranomasimbe Atlantika.
Ity dia epicostika efa antenaina avy any amin'ny ilany atsinanana mankany amin'ny ilany andrefan'ny kaontinanta afrikanina ity dia ho fizahan-tantara sy fizahan-tany amin'ny tantaran'ny Africa hahita mpandeha iray, fiaran-dalamby mpizahatany mitsangatsangana mamaky ny lalamby Tanzania sy Zambia (TAZARA) mankany Kapiri Mposhi any Zambia.
Avy any Zambia, ny lamasinina Pride of Africa dia hikorisa amin'ny zotram-piaramanidina Zambia avy eo amin'ny gara Kapiri Mposhi ary avy eo mifandray amin'ny National Railways Company of Congo (SNCC) hanatevin-daharana ny lalamby Benguela amin'ny gara Luau any Angola akaikin'ny sisin-tanin'i RD Kongo ka hatrany Lobito eo amin'ny Ranomasimbe Atlantika.
Ny tatitra avy amin'ny foiben'ny Rovos Rail any Pretoria, Afrika Atsimo dia nilaza fa hanomboka ny 16 jolay avy any Dar es Salaam ny fitsangatsanganana an-tsokosoko mba hametrahana ny fitsidihana ny Selous Game Reserve any atsimon'i Tanzania, sidina anaty safari roa alina ao amin'ny valan-javaboary South Luangwa any Zambia ary fitsidihana tanàna any Lubumbashi any RD Kongo.
Aorian'izay, ny fiaran-dalamby lafo vidy sy antitra dia hanatevin-daharana ny laharan'i Benguela amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra fohy amin'ny antsipiriany momba ny tantaran'i Angola ary avy eo dia handeha miaraka amin'ilay epic, dia tantara manan-tantara izay nifarana tany Lobito ho any aoriana, dia ny fiaingany tamin'ny andro faharoa tamin'ny volana aogositra. .
Ny mpitantana ny serasera Rovos Rail, Brenda Vos-Fitchet dia nilaza fa ny fitsangatsanganana mandritra ny 15 andro mamakivaky an'i Tanzania, Zambia, ny DR Congo ary Angola no voalohany amin'ny tantaran'ity faritr'i Afrika ity fa misy lamasinina mpandeha iray hizotra avy any atsinanana mankany lalana andrefana mampitohy ny seranan-tsambon'ny Ranomasimbe Ind Dar Sala Sala ao Tanzania ary ny seranan-tsambo Atlantika Lobito any Angola.
Ny tahan'ny dia ao amin'ity epic, dia ity dia manomboka amin'ny $ 12,820 isaky ny olona mizara, miovaova arakaraka ny karazana suite ary feno trano, sakafo, zava-pisotro misy alikaola sy hafa rehetra, serivisy any amin'ny efitrano, fanasan-damba, mpahay tantara ary dokotera eny an-tsambo koa. toy ny fitsangatsanganana sy safira manidina roa alina ao anatin'izany ny trano fonenana, sakafo, rano tavoahangy ary fisafidianana divay voafetra isaky ny lalam-pitaterana navoaka.
“Ny fahafahako mampiditra zava-miafina vaovao aorian'ny niasa nandritra ny 29 taona dia mampientanentana ary manome ahy fanamby hiasa mamelombelona. Roa taona mahery no nanaovana fahazoan-dàlana ary nankatoavin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny zotranay ”, hoy ny Rovos Rail Owner sy ny Lehiben'ny mpanatanteraka Atoa Rohan Vos.
"Ny ekipako sy izaho dia nanidina nanerana ny sisintaninay tamin'ny fotoana vitsivitsy mba hihaonana amin'ireo tompon'andraikitra mifandraika amin'izany, hitarika ny làlana ary hanao fitsidihana tranokala amin'ny ezaka hanadiavana ny fomba araka izay tratra ho an'ireo tarika mpandeha tsy mivadika izay manantena ny hiaraka aminay ity dia ity, ”hoy izy.
Rovos Rail koa dia miasa lamasinina raitra avy any Cape Town mankany Victoria Falls any Zimbabwe, miaraka amin'ny dia maro hafa. Ilay lamasinina taloha dia nanao ny diany voalohany tany Dar es Salaam tamin'ny Jolay 1993, izay nankafizin'ny mpizahatany ny nivezivezy tao amin'ny Edwardian, mpanazatra hazo 21 efa zatra mahazaka mpandeha 72 iray manontolo.
Ireo mpanazatra hazo tranainy dia eo anelanelan'ny 70 ka hatramin'ny 100 taona, ary efa natokana ho any anaty kalesy mendrika ny mpandeha.
Any Pretoria, Afrika atsimo, ny lamasinina Rovos Rail na “The Pride of Africa” dia vonona tanteraka, nofinofin'i Cecil Rhodes teo aloha hampifandray ny kaontinanta afrikanina avy any Cape Town ka hatrany Kairo amin'ny lalamby.
Ny fiaran-dalamby Rovos Rail dia manaraka ny lalan'i Cecil Rhodes avy any Cape, mamakivaky an'i Afrika atsimo ka hatrany Dar es Salaam ary mampifandray ireo mpandeha azy amin'ny faritra hafa amin'ny kaontinanta afrika amin'ny alàlan'ny tambajotram-by any Afrika Atsinanana.
Rovos Rail dia orinasan-dalamby tsy miankina miasa eo ivelan'ny Capital Park Station any Pretoria, Afrika Atsimo. Rovos Rail dia mitarika ny fizahan-tany fizaran-tany sy epôsika amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana tsy tapaka amin'ny zotra maro manerana an'i Afrika atsimo, ao anatin'izany ny fianjerana Victoria mahafinaritra any Zimbabwe sy Zambia.
Nandritra ny diany nianavaratra nankany Tanzania, ny Pride of Africa dia namakivaky faritra manintona ara-tantara sy fizahan-tany any amin'ny faritra atsimon'i Afrika, ao anatin'izany ny Riandranon'i Victoria ao Zimbabwe, ny toeram-pitrandrahana diamondra Kimberley any Afrika atsimo, ny Limpopo ary ny Valan-javaboary Kruger ary ny reniranon'i Zambezi.
Ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi dia miorina amin'ny fandraisana ireo atleta sy mpitsidika olympika manokana
Seattle dia mankalaza ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany mamaky rakitsoratra miaraka amin'ireo mpitsidika mihoatra ny 40 tapitrisa amin'ny taona 2018